उनले थाहा नपाएको त्यो विभेद !
उनले थाहा नपाएको त्यो विभेद ! सृजना शर्मा
बाह्रखरी - आइतबार, कात्तिक २३, २०७७
उनलाई मैले भेटेको धेरै भएको छैन । विस्मयकारी चम्किला आँखा छन् उनका । अदम्य साहस र आत्मविश्वास भरिएको छ उनमा । भर्खर चन्द्रमालाई टपक्क हातले टिपेर ल्याउँछु झैँ गर्छिन् उनी । उनको यही आत्मविश्वास देखेर उनीबाट उत्कृष्टताको अपेक्षा गर्नेहरुको लामै सूची छ मसँग ।
भर्खर विद्यालयको पढाइ सकेर भविष्यका अनगिन्ती सुनौला सपना बोक्तै उनी कलेज जान थालिन् । पढाइमा सधैँ अब्बल उनी कलेजमा पनि त्यही रफ्तारमा बढ्दै गइन् । उनी जहाँ जान्थिन् त्यहीँ सफल हुन्थिन् । लाग्थ्यो, उनी सफलताकी पर्याय हुन् । धेरै आमाहरुले उदाहरण दिने पात्र बनेकी थिइन् उनी । उत्कृष्टताका साथ कलेजको पढाइ सकेपछि सुनौला सपनाहरु मनभरी सजाएर काठमाडाैं उपत्यका प्रवेश गरिन् ।
सपनाको नगरीमा उनका सपनाहरु भर्खर फस्टाउन लागेका थिए । आफ्ना जीवनका उद्देश्यहरु पूरा हुँदाका दिन कल्पेर पनि खुशी हुन्थिन् उनी र मलाई सुनाउने गर्थिन् — “हेर ! एकदिन म यो सहरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउने छु । आफ्नै अस्तित्वमा बाँच्नेछु । म आमाबुबालाई आफैँसँग राखेर पाल्नेछु । उहाँहरुलाई कुनै दुख कष्ट हुन दिनेछैन ।” लाग्थ्यो उनले आफ्ना सपनाहरु सबै बाँच्नेछिन् र एउटा सुन्दर संसार बसाउनेछिन् ।
उनी भन्ने गर्थिन् — छोरा र छोरीबीच विभेद हुन्छ भन्छन् तर आजसम्म मैले त्यो विभेद कस्तो हुन्छ थाहा पाएको छैन । म पनि छोरी हो तर छोरा समान छु । हुनपनि आजसम्म उनलाई पारिवारिक रोकटोक थिएन पनि । उनले अवश्य एकदिन खुसीको बहार ल्याउनेछिन् भन्ने लाग्थ्यो मलाई ।
उनका कलिला सपनाहरुले एक दुइ पाइला सार्दैथिए अचानक उनी विवाहको पारिवारिक दबाबमा परिन् । उनले विवाह अहिले चाहेकै थिइनन् । उनले धेरै काम गर्न बाँकी थियो । उनका सारा सपना अधुरा थिए । तर, पनि समाजमा सानैदेखि अनुशासित हुनुपर्छ, आफूभन्दा ठूलाले सधैँ भलो सोच्छन् भन्ने सुनेर हुर्केकी उनले विद्रोह गर्न सकिनन् । समाजले जे सोचिरहेको थियो त्यसभन्दा चार कदम अगाडि थियो उनको सोच तर परिवारले उनको सोच बुझ्ने चेष्टा नै नगरी उनलाई पराई घर पठाइदियो ।
केही वर्षपछि मेरो उनीसँग सम्पर्क भयो । उनको त्यो मलिन अनुहार र सपना विहीन आँखाहरुलाई केहीबेर नियाली रहेँ मैले । उनका आँखाबाट अहिले सुन्दर सपना बिलाएछन् । त्यहाँ छन् त केही बोझिला व्यावहारिक झन्झटहरु । मैले उनको हालचाल सोध्दै गएँ — के गर्दैछयौ अहिले । भनिन् केही गर्दिन । पतिले तिमीले किन काम गरेर दु:ख गनुपर्यो म छँदैछु नि भन्नुहुन्छ । त्यही भएर म घरै बसेर बालबच्चा हुर्काउँदैछु । त्यो पनि एउटा ठूलो काम नै हो । म उनको कुराले एकछिन अवाक भए । के भन्ने उनलाई, कति परिवर्तन भइछन् उनी, आफूलाई यति चाँडै उनले कसरी बिर्सन सकिन्, उनका प्रतिभा, उनका चाहना, उनका सपना कहाँ गए ? उनले आफूलाई पूर्णरुपमा घरपरिवारमा समर्पित गरिछन् । तर पनि मैले उनलाई तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्न छोडिन । तिमीले आफ्नो प्रतिभालाई यसरी खेर जान दिनुहुँदैन । तिमी केही गर यसरी नबस भनी मैले भनिरहँदा उनले एउटा कानले सुनेर अर्कोले उँडाइरहिन् ।
आफ्नै व्यस्तताले म फेरि केही समय उनीसँग सम्पर्कविहीन भएँ । निकै समय बितिसकेको थियो । उनी कता हराइन् मैले भेट्न सकिरहेकी थिइन तर भेट्ने तीव्र चाहना थियो । एकदिन फेसबुकमा उनलाई भेटेँ र कुनै रेस्टुराँमा चिया कफीको निम्तो गरँे । तर, उनले घरमै भेट्ने जिद्दी गरिन् र उनलाई भेट्न पुगेँ म ।
उनका सन्तान पनि ठूला भइसकेछन् । सबै आआफ्नै व्यस्ततामा रहन थालेछन् उनी सिँगो एक्लो घरमा टुक्रुक्क रहिछन् । कहीँ कतै एक्लै जानसक्ने हिक्मत रहेनछ उनमा । अब केही गराैँ कतै व्यस्त हौँ भन्दा सबै आत्मविश्वास हराइसकेछन् उनमा । घरभित्रको चौघेरामा कैद उनको जीवन अति निरस भैसकेछ । के गर्ने म उनको समय फर्काउन सक्दिनथे अन्यथा म उनलाई फेरि तिनै पुराना दिनमा पुरयाएर ‘रिस्टार्ट’को स्वीच अन गर्थे ।
उनले कफी बनाएर ल्याइन् । उनको घरको कौसीमा मीठो कफीको चुस्कीसँगै हामीले विगत सम्झ्यौँ । उनका सफलताका दिनहरु सम्झ्यौँ । उनको आत्मविश्वास र सपनाका कुरा सम्झेर बररर् आँखाबाट आसु खसाल्यौँ । यसपटक उनको सपनाविहीन आँखाले रसिलो हुनुबाहेक अरु केही देखाएन मलाई । म उनको रसिलो आँखालाई मेरो आँसुले धमिलो भएको आँखाले हेरिरहेँ र उनले भनिन् जुन दिन मेरो पतिले — “तिमीले काम गर्नुपर्दैन म छु नि म गरिहाल्छु तिमी घर सम्हाल” भन्नुभयो तेही दिनदेखि छोरा र छोरीको विभेद सुरु भएछ तर मैले पत्तै पाइन ।
छोरालाईजस्तै उनलाई पनि उनको भाग्य निर्माता उनी आफैँ हुन छोडिदिएको भए, अर्काको भाग्यमा खाने जात नसोचिदिएको भए , सायद उनी आफ्नो सपना बाँचेर खुसी हुन्थिन् होला, गर्विलो जिन्दगी बाँच्थिन् होला । तर, छोरीलाई उमेरले बीस काटेपछि अवसर दिनुभन्दा विवाह गरेर पराइघर पठाउनको हतार गर्ने हाम्रो समाजको चेत कहिले खुल्ने ? समानताको खोक्रो गफ गर्ने, ऐन बनाउने तर व्यवहारमा रत्तिभर परिवर्तन हुन नखोज्ने हाम्रो समाज कहिले सुध्रिने ?
घरको छोराले लुगा धोएर सुकाएको देख्दा जिब्रो काढ्ने हाम्रा समाजका भद्रभलादमीमा कहिले परिवर्तन आउने ? छोराले घर सफा गरे, कुचो लगाए छोराको आयु नै घटिहाल्छ भनी सोच्नेहरुको मगज कहिले पखाल्ने ? जबसम्म यस्ता ससाना तर समानताका खुट्किलाहरु दरा टेकिन्नन् तबसम्म समानताका हजारौं प्रतिवेदन बनाए पनि, कडा कानुन बनाए पनि ती कागजमा सीमित हुनेछन् । अतः समान र सभ्य समाज निर्माणका लागि छोरीलाई हरेक क्षेत्रमा उनको योग्यताअनुसारको समान अवसर दिनु अपरिहार्य छ ।
आइतबार, कात्तिक २३, २०७७ मा प्रकाशित
त्यो बेलाका डीआईजी पूर्वप्रहरी निरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले लेखकलाई सुनाएका छन् – राति ११ बजेतिर राजा वीरेन्द्रबाट निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गरी... १७ मिनेट पहिले